Mpiasa tara lava Mitentina 1.770.000 Ar isan’olona isan-taona ny fatiantoka
Vidin-tsolika Tsy hisy fihenana aloha
« Tsy hidina ny vidin-tsolika na dia misy fihenana eo anivn` ny tsena iraisam-pirenena » hoy ny praiminisitra Ntsay Christian omaly.
Sosialy sy toekarena “Avoty ny vahoaka sy ny mpandrahara”
Tafiakatra 518 tapitrisa dolara no azo avy amin’ny mpamatsy vola, izay tokony hangarahara ary mila jerena ny toekarena sy ny sosialy satria fantatry ny vahoaka fa misy vola ao.
Nosy Sainte Marie Tsy hisy mpizahantany hijery trozona amin’ity taona ity
Ahiana ho taona tsy mahavokatra ho an'ny fizahantany mihitsy ity taona ity ho an'ny Nosy Sainte Marie.
Varotra Lavanila any Nosy be Nivoaka ireo fepetra
Araka ny naoty navaokan` ny ministeran` ny varotra dia omaly no daty hanokafana tsena Lavanila any Anjiabe Kaominina Nosy-Be.
Sehatra tsy miankina Nolavin'ny fanjakana ilay drafi-panampiana
Notsipahan` ny fanjakana ny drafitra fanalefahana ny voka-dratsy nateraky ny aretina COVID-19 amin` ny sehatra tsy miankina, hoy Thierry Rajaona, filohan` ny Groupement des entreprises de Madagascar (GEM).
Nosy be Natsaraina ny famatsiana angovo
Noraisin’ny ben’ny tanàna ao Nosy be, Gilbert Vita, omaly, ny solontenan’ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny angovo sy ny akoran’afo.
Gédéon Rajaonson "Mila ezaka be ny fanarenana ny toekarena"
Lehibe ny fiantraikan’ny valan’aretina eo amin’ny fiaraha-monina sy ny toekarena manontolo. Ny fihibohana sy ny fikatonan’ireo orinasa dia nampidina haingana ny famokarana ka namotika ny toekarena hoy Atoa Gédéon Rajaonson.
Raha vao miresaka fanaovana taratasim-panajakana, eto amintsika, dia mby ao an-tsaina foana ny momba ireo mpiasam-panjakana tara lava.
Efa zary tandra vadin-koditra amin’ireo sasany mihitsy ny kolontsain’ny tara lava, hany ka sarotra ny manaja lera, ho an’ireo fônksiônera sasany. Misy akony ratsy any amin’ny toekaren’ny firenena anefa ny fahataran’ny mpiasa, ka tsy mahagaga raha tara lava ihany koa isika manoloana an’ireo firenena hafa, voasokajy ho tany mahantra foana. Mety ahitana taratra ny vidin’ny fahatarana mahagidany lava antsika ity fanadihadiana iray natao tany Etazonia ity. Any an-toerana dia miisa 590 000, amin’ny ankapobeny, ny isan’ny mpiasa tara isan’andro. 97 minitra isam-bolana, isaky ny mpiasa, amin’ny ankapobeny, ny ora very isam-bolana, ora izay tokony ho nihodinan’ny orinasa. Vokatr’izay dia 480 $, izany hoe : manodidina ny 1.770.000 Ar isan’olona isan-taona ny fatiantoky ny orinasa iray, vokatry ny fahatarana. Dia hevero izany ny fatiantoky ny firenena malagasy, raha ny ankamaroan’ireo mpiasam-panjakana 75 320 isa no tara ora 2 na 3 isan’andro, vokatry ny fitohanan’ny fifamoivoizana, ny andro ratsy, na ny antony manokana izay miankina aminy ! Raha tsiahivina, tamin’ny taona 2007 no nanomboka niditra tamin’ny 9 ora maraina ireo mpiasam-panjakana sasany. Antony iray nanemorana an’io ora fidirana io ny fimenomenoman’ny vahoaka, noho izy ireo tara lava, saingy mbola mitoetra ihany ny fahazaran-dratsin’ny sasany, 2 taona aty aoriana. Na ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara aza moa, dia nanamarika an’izay tsy fanajan’ny mpiasam-panjakana ny ora fiasana izay, tao anatin’ny taratasy misokatra « Ho an’ny Kristianina rehetra sy ireo izay tsara sitra-po » navoakan’izy ireo tamin’ny volana novambra tamin’ny taon-dasa.